वीर अस्पतालको गाडीमा यो के हो ? सरकारी गाडीमा लाग्दैन कोरोना ? (भिडियो सहित)
शुक्रबार, असार ०४, २०७८
बिहिबार, साउन ०८, २०७७ मा प्रकाशित
अस्ति राति १२ बजेबाट लक-डाउनको विधिवत अन्त्य भएको छ । लकडाउन हटेपनि कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्था यथावत नै रहेन सरकारले बताएको छ । काठमाडौँ भित्र सवारी साधन चल्न थालेका छन् तर सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर भने सवारी साधन नचलेको पाईयो ।
सरकारी होस् या निजि जुन सुकै सवारी साधनले पनि मापदण्ड अनुसार चल्नु पर्नेमा वीर अस्पतालका ४ वटा गाडी भने सिट क्षमता भन्दा बढी स्टाफ बोकेर चलेको भेटियो । सरकारले सिट क्षमता भन्दा आधा यात्रु मात्र राख्न पाउने नियम लागु गरेको छ तर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको गाडीले खचाखच स्टाफ लिएर गएको भेटियो ।
हामीले किन यसरि हिड्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दा स्टाफका लागि सिमित गाडी भएको र लकडाउन भए पश्चात त्यसरी हिड्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । प्रशासनमा भन्दा पनि उनीहरुको कुरा नसुनिएको गुनासो पनि गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि जारी गरेकाे लकडाउन आजबाट अन्त्य भएको छ । साउन ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोन भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । सुरूमा ८ दिनका लागि गरिएको लकडाउन पटक पटक थपेर जेठ २६ सम्म पूर्ण रुपमा कायम रह्यो । त्यसयता भने सरकारले क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउँदै आएको थियो । बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला :